अब बिरामी फर्काउँदैनन् अस्पताल - Sidha News
अब बिरामी फर्काउँदैनन् अस्पताल
काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालहरूले उपचारका लागि आएका बिरामी बेड नभए पनि आकस्मिक व्यवस्था गरेर उपचार गर्न थालेका छन् । यसबाट उपचार पाउनेमा बिरामीको भरोसा बढेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१५ मिलनचोककी सुकुमाया तामाङलाई बुधबार अचानक जीउ काम्ने र लगातार खोकी लाग्ने भइरह्यो । बिहीबार बिहान औषधि लिन नजिकको मेडिकलमा पुगेकी थिइन् । त्यहाँबाट अस्पताल नै जान सल्लाह पाइन् ।
आफन्तले उनलाई बिहान १० बजे टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पुर्‍याए । अस्पतालमा शय्या खाली थिएनन् तर उनले निराश भएर फर्कनुपरेन । अस्पतालले टहरामै राखेर भए पनि उपचार सुरु गर्‍यो ।
‘ओढ्ने–ओछ्याउने नभएर के भयो, घरबाटै भए पनि सिरक–डसना ल्याउँला । यस्तो महामारीमा आश्रय दिनु नै ठूलो कुरा भयो,’ सुकुमायाकी बहिनीले भनिन्, ‘दिदीको छातीमा समस्या देखिएको छ रे । डाक्टरले एक्सरे लिनुपर्छ भनेको छ । त्यसैको पर्खाइमा छु ।’
सास फेर्न गाह्रो भएर आएका टेकुका राम कार्कीलाई बेड खाली नभएकाले अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्ड छिर्ने गेटमा राखेर अक्सिजन दिइयो । ‘इमर्जेन्सीमा बेड खाली भएपछि भित्र लाने भएको छ,’ उनका छोराले भने । तीन दिनअघि ज्वरोले थला परेका कोभिड बिरामी कीर्तिपुरका अर्जुन महर्जन पनि टहरामा बसेर उपचार गराइरहेका छन् ।
महर्जन जस्तै टहरामा उपचार गराउने अन्य पनि छन् । उपचारका लागि आएका बिरामीलाई नफर्काएको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताए । बिरामी डिस्चार्ज भएपछि बाहिरका बिरामी बिस्तारै भित्र सार्ने गरिएको छ । ‘टहरामा पहिला पार्किङ थियो, बिरामीको चाप बढेपछि त्यहाँ १० बेड राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपयलाई अस्पतालको प्रांगणमा त कतिपयलाई इमर्जेन्सी वार्डको बाटैमा राखेर भए पनि उपचार गरिएको छ । बिरामी भने फिर्ता पठाएको छैन ।’
उनका अनुसार कोभिडका बिरामी आउने क्रम हिजोअस्तिको तुलनामा केही कम भएको छ । ‘पहिला प्रांगणमै उपचार गराउने १०/१५ जना हुन्थे, अहिले घटेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पतालमा अक्सिजनको पनि अभाव छैन ।’ टेकुमा अहिले उपचारार्थ भर्ना रहेका कोभिड बिरामी १ सय १६ जना छन् ।
वीर अस्पतालमा ओपीडी र ज्वरो क्लिनिक सञ्चालनमा छ । आकस्मिक वार्डमा २५ जना उपचारार्थ भर्ना छन् । ३ सय बेडको जनरल वार्ड चलिरहेको छ । ‘अस्पतालले अहिले भर्ना हुन आएका कोभिडका बिरामीलाई अन्त जानुस् भन्दैन,’ डा. सुशील मोहन भट्टराईले भने, ‘अरू अस्पतालबाट हारगुहार गरेर सिलिन्डर ल्याएर भए पनि बिरामीको उपचार गरिरहेका छौं ।’
वीरलाई आफ्नो प्लान्टबाट उत्पादन हुनेबाहेक पनि दैनिक करिब डेढदेखि दुई सय सिलिन्डर अक्सिजन खाँचो हुने गरेको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिएको उनले बताए । वीरमा २१ वटा आईसीयू बेड सबैमा बिरामी छन्  । २३ वटा भेन्टिलेटरमध्ये ५ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । वीर अस्पतालकी निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाले कुनै पनि सेवा नरोक्ने हिसाबले अन्य रोगका बिरामीको पनि उपचार सुचारु गरिरहेको बताइन् । ‘खाली भेन्टिलेटरमा बाहिरका बिरामीभन्दा पनि अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीहरूलाई सारिनेछ,’ उनले भनिन् ।
पाटन अस्पतालले आउने बिरामीलाई वार्ड खाली नभए इमर्जेन्सीमा राखेर भए पनि उपचार गरिरहेको अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए । यहाँ कोभिडबाहेक अन्य रोगका बिरामीको पनि उपचार भइरहेको छ । ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले उपचारार्थ आउने बिरामीलाई रेफर गर्न छाडेको जनाएको छ ।
‘जसरी भए पनि अक्सिजनसहित अस्थायी व्यवस्थापन गरेर पनि उपचार गरिरहेका छौं,’ निर्देशक डा. सुरज वज्राचार्यले भने, ‘सुरुमा इमर्जेन्सीमा राख्छौं, वार्ड खाली भएपछि सार्ने गरेका छौं । आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पालो मिलाएका छौं ।’कान्तिपुर